आलोचकलाई धमलाको चुनौती, ‘एक घण्टा अङ्ग्रेजीमा बहस गरौँ’ – mero sathi tv
आलोचकलाई धमलाको चुनौती, ‘एक घण्टा अङ्ग्रेजीमा बहस गरौँ’
On ४ चैत्र २०७४, आईतवार ०६:४१
गत सोमबार काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएस बंगाल विमान दुर्घटनामा पर्यो । विमान दुर्घटनामा परेको केही समयमा नै विश्वभरका समाचार संस्थाको ध्यान त्रिभुवन विमानस्थलमा केन्द्रित भयो।
समाचार प्रसारण गर्ने सिलसिलामा भारतस्थित एक टेलीभिजनले पत्रकार ऋषि धमलासँग विमान दुर्घटना सम्बन्धी जिज्ञासा अङ्ग्रेजीमा साध्यो जसको जवाफ धमलाले हिन्दीमा फर्काए । उनले अङ्ग्रेजीमा सोधेको प्रश्न हिन्दीमा फर्काएपछि सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार धमलाको चर्को आलोचना भयो र उनी मजाकको पात्र पनि बने।
आलोचनापछि एक युट्युब च्यानलसँग कुरा गर्दै पत्रकार धमलाले हिन्दी भाषा भारतीयहरूले बुझ्ने भाषा भएकाले आफूले हिन्दीमा बोलेको बताएका छन् ।
” के हिन्दी भाषा नेपाली नेताले बोलेका छैनन् ? के नेपालीहरूले हिन्दी भाषा बुझ्दैनन् ? के विमान दुर्घटनाको सूचना भारतीय जनतालाई दिनु के मेरो अपराध थियो ?, ” उनले प्रतिप्रश्न गरे।
अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले अरु के भने पूरा भिडियो हेर्नुस्।
एयर ट्राफिक र पाइलटको सम्बाद सुनेपछी बिमान दुर्घटनाको बारेमा बोले बिश्वभरका पाइलट(भिडियो सहित)
आईसीसीले नेपालीमै रेकर्ड गरायो सन्दीपको सन्देश, सन्दीपले के भने (भिडियो)